Arụ ọrụ dị ka a tọghatara kwesịrị site Scot M
Nkwado bụ elu, na-eme ka m a obi ụtọ ahịa. Daalụ Wondershare!
oké site janigma
Wondershare Editor site Fanly Pan
Nke a bụ ihe ịtụnanya nchịkọta akụkọ iji dezie gị video! Ọ nwere dị iche iche nke ihe ndị ị pụrụ tinye na gị videos! M ukwuu nwere ike ikwu Wondershare dị ka ọ bụ ndị kacha na kasị ụtọ nchịkọta akụkọ m na mgbe ji! Ọ bụ nnọọ onwe nkọwa iji dị ka ọma :)
Ultimate on Mac site Joel Newman,
Nke a Wondershare software bụ n'ezie nnọọ ezi. M nwere ike ikwu ya onye ọ bụla na-eji FCP na Premiere na ike-akwadebe faịlụ maka Archive na web (okenye formats na-adị mfe si mesoo - karịsịa ISO faịlụ!). Ọ nd-eyiri Sony XDCAM Ọpụ NA AVCHD faịlụ maka FCP! Ọ transcodes ngwa ngwa, ọ na-eme batches, ọ na-eme H.265, ọ na-akwadebe faịlụ maka YouTube na-eme ka uploads quicker. Ọ na-eme ihe niile MPEG Streamclip mere, ya n'ụzọ zuru ezu customizable. Ya nke ọma uru na-zuru version na DVD plugin. Ukwuu n'ihi na izi mkpa. Ọ bụrụ na Wondershare nwere ike tinye audio "dị ọcha-elu" Ngwaọrụ (igbu mkporohihi, Pop scratches, mkpakọ) na mgbakwunye na "olu" ọ ga-ihe fọrọ nke nta zuru okè video Archive ngwá ọrụ. Ya na-enweghị ike ịnabata ihe karịrị otu ISO faịlụ na mbubata mgbe amassing a ogbe encode, nke mgbe i nwere ọtụtụ narị faịlụ ime, slows ị na-ala dị nnọọ ọtụtụ.
Izzy site Israel
Ọ bụ banyere Milton Hershey School ụmụaka.
Gụgharia ka Rasberry Pi site Ray Johnson
M na a na-achọ a gụgharia na ngwa na-ga-arụ ọrụ nke ọma na m na utu Pi. M na-agbalị ikenye n'ime ha m na zụtara Beamer. Ọ na-arụ ọrụ (ụdị). Ọ bụ onye na-adịghị na-amalite iyi, freezes na-eme ka ndị a "ripp" noises mgbe gụgharia. M chọpụtara na VCU nwere wuru na-streamer. Ọ na-arụ ọrụ nnọọ nke ọma - ọ na anya n'ebe ahụ. Dị m nnọọ ka m maara na mee elu mee na VCU nwere otu. The GUI kwesịrị ụfọdụ ọrụ na m ga-enyefe aro ụfọdụ na-abịa ụbọchị. Mere nke ọma ọzọ, Wondershare.
Unmatched NA ọsọ site Ray Johnson
M na a VCU ọrụ maka a di na nwunye nke afọ ugbu a na ya dị nnọọ na-eme-mma na mma. The Ntụgharị enwetatụbeghị ibu ngwa-ngwa na nhọrọ-enweta ihe hiri nne. M kwere na mmepe ha obi na mkpụrụ obi na ngwa a. The akụkụ kasị mma? M mgbe aghaghị ịkwụ ụgwọ maka nweta nkwalite. Mere nke ọma, Wondershare.
Excellet site Ramon Rodriguez Andino
Ihe ndị magburu onwe ngwá ọrụ maka converting videos mfe.
Zuru okè n'ihi na otutu na ngwa ngwa conversions site Rod Merkley
M na-ezi ihe online N'ezie ebe ụmụ akwụkwọ na-chọrọ n'okpuru video n'ihu. M na-enweta video faịlụ a na ọtụtụ formats na ụdị faịlụ. M ịdọrọ na dobe multiple faịlụ n'ime Ntụgharị, nyegharịa niile faịlụ, tinye a aha faịlụ niile, dezie dị ka mkpa (tụgharịa eku, ebelata video, wdg), na mgbe ahụ, m see tọghatara bọtịnụ na niile faịlụ na-converted n'ime ihe mgbe format m na-ahọrọ (e nwere otutu nhọrọ). M na-na gbalịrị ọzọ ha na-anaghị atụ.
Mfe site Jack
Nke kasị nnọọ keukwu na ngwa ngwa Ntụgharị
Na Mbụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next